Tababare Cabdi Joon oo ka hadlay guushii ay ka gaareyn kooxda Raadsan – Gool FM
Tababare Cabdi Joon oo ka hadlay guushii ay ka gaareyn kooxda Raadsan
Dajiye January 14, 2020
(Muqdisho) 14 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Horseed FC ayaa guul muhiim ah ka gaartay naadiga Raadsan kaddib markii ay 4-2 ugu adkaadeen, ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan ay u soo daawasho tageen taageerayaal tiro badan kuwaasoo kala taageersanaa labada kooxood ee Horseed iyo Raadsan.
Naadiga Horseed ayaa fasal ciyaareedkan horyaalka soconaya waxey ka dheeshay saddex kulan, labo kamid ah waxey gashay bar-bardhac halka kulanka kale ay badisay, taas oo ka dhigan iney leedhahay 5-dhibcood.
Horseed sanadkii la soo dhaafay waxaa si dirqi ah koobka horyaalka ugu qaaday kooxda Dekedda. waxaana looga qaaday 2-dhibcood oo qura.
Haddaba kaddib guushii ay shaley ka gaareyn kooxda Raadsan waxaa ka hadlay hogaamiyaha kooxda Horseed Cabdi Joon wuxuuna yiri:
“Allaah ayey mahad u sugnaatay oo inoo suurta galiyay inaan helno saddexdii dhibcood ee ugu horeysay horyaalka fasal ciyaareedkan, waa mid na farxad galineysa inaan bilaaw wanaagsan ku bilaawano fasal ciyaareedkan”.
“Dhamaan ciyaartooyda iyo maamulka kooxda waxey diraada saarayaan si ay ugu guuleysan lahaayen horyaalka oo mudo ugu dambeysay kooxdan, waad ogeydeen sanadkii la soo dhaafay labo dhibcood oo qura ayaa nagala qaaday horyaalka”.
“Horseed waa koox weyn sanadkii la soo dhaafay waxey gacanta ku dhigtay koobka General Daa’uud wuxuu inoo ahaa bilow wanaagsan oo ka turjumaya inaan awood u leeynahay ku guuleysiga horyaalka.
Si kastaba ha noqotee, Kooxda Horseed ayaa kulankeeda 4-aad ee horyaalka waxey la dheeli doonta naadiga Gaadiidka, ciyaartaas ayaana dhici doonta 17-ka bishan Janaayo oo ku beegan maalinta Jimcaha ee soo socota.
W/D Cabdifitaax Nani.
Horudhac: Wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka adag kooxaha Mogdisho City Club Iyo Elman ee horyaalka Somali Premier League
Macalinka kooxda Elman oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kaga qeyb galaya kulanka galabta ee MCC
FIFA oo xaqiijisay xilliga la ciyaari doono saddex ka mid ah tartamada hoos taga ee dib u dhacay
Muddada la isticmaalayo shanta baddel, qaabka iyo waqtiyada gaarka ah ee la oggolyahay iyo xeerarka ku xeen daaban baddellada… (Shanta baddel oo la ansixiyay iyo VAR oo meel la iska dhigay)
Ciyaaryahan geeriyooday 2016 oo isagoo nool lagu arkay dalka Jarmalka